जर्जियाको वर्ष-राउन्ड रेफ्रिश
शौक र क्रियाहरु साल्ट वाटर फिशिंग
तिनीहरूलाई यी सुझावहरू समात्नुहोस्
रेफ्रिश, रातो ड्रम, पिल्ला ड्रम, रातो बास, च्यानल बास, वा स्पटेल बास, तपाईले जो पनि बोलाउनुहुन्छ, यी तटीय माराउडरहरूले धेरै वर्षको म्याग्दीमा जर्जिया एङ्गलरको लागि म्याग्दीको लागि म्याग्दीको म्याग्दीमा उनीहरूको बानीहरू पछ्याउन पर्याप्त माछा मार्ने गर्छन्।
स्पॉटेज ड्रम परिवार को सदस्य हुन्, एक परिवार को नाम जो ड्रमिंग आवाज देखि आउँछ उनि आफ्नो हावा ब्लडर्स संग बनाते हो। धेरै मानिसहरू थाहा छैन कि हेरेको सीटआउट यो परिवारको सदस्य हो।
सारा जर्जियाको तटमा रेड ड्रम भेट्टाउन सकिन्छ, सेन्ट मैरी नदीबाट सावनाह नदीसम्म र सबै ठाउँमा बीच। तर वास्तवमा जहाँ किन समुद्र तटमा तिनीहरू हुनेछन् र तपाईं तिनीहरूका लागि माछा कसरी वर्षको माछा मा निर्भर हुन्छ। रेडिंग र बिरोधको दौडमा रातो चक्रको एक निश्चित चक्र पछ्याउँदछ।
यो जीवन चक्रको ज्ञान जर्जियाको तटीय भौगोलिक ज्ञानको साथ युगको साथ तपाईं सबै वर्ष लामो माछा पकड्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
जर्जियाको सम्पूर्ण तटमा नमक मार्क्सहरू समावेश छन् जसमा सयौं सानो रचनाहरू, नदीहरू, उथली चक्कु फ्लैटहरू र ओइजर सलाखहरू विभाजित हुन्छन्। यी मार्शाहरूलाई सुरक्षा गर्न बाधा द्वीपहरू छन्। प्रायजसो समुद्री स्तरभन्दा माथिको उचाई माथिको उचाईको रूपमा, ती बाधा द्वीपहरू हजारौं वर्ष बालुवाको सर्फ समुद्र तटमा निर्माण गरिन्छन्। जेकिल, सेन्ट सिमोन, सेपेलो र धेरै अन्य बाधा द्वीपहरूले यो मार्श संरक्षण प्रदान गर्दछ।
यस माछाको जीवन चक्रलाई बुझ्न, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि रातो कम्तीमा यौन परिपक्वता सम्म पुग्न नसक्नेसम्म कम्तीमा मात्र पाँच वर्ष सम्म पुग्न सक्दछ।
तिनीहरू लम्बाइमा बीसौं देखि तीस इन्च हुनेछ र यस समयमा आफ्नो जीवनमा पन्ध्र पाउन्ड भन्दा बढी हुनेछ।
धेरै मानिसहरुले सोच्न को लागी लाल ड्रम को लागी कोष्ठ या ताजा पानी को आवश्यकता हो। उनीहरूले यो पछाडि पानीको आवश्यकता पर्दछ, यो प्रजननको लागि होइन तर ब्रोडिङका लागि।
जुलाई देखि सेप्टेम्बर सम्म, ठूलो माछा कटौती र इनलेटहरु को नस्ल को बाहिर तटस्थ स्थान ले जान्छ।
ठूला स्त्रीहरूले यी महिनाहरूमा धेरै चोटि बिगार्न सक्दछन्, त्यसका लागि धेरै पुरुषहरु को लागी पानीमा धेरै लाख अण्डाहरु लाई उखेल्ने गर्दछन्। ड्रम को विशाल स्कूलहरु लाई यिनी प्रजनन अवधि को समयमा निगरानी विमान द्वारा पानी को सतह को तहत अपतटीय दिख रहेको छ। प्रजननको मौसमको दौडान यो ठूलो-स्कुलिङ बानी, र पत्ता लगाउन सजिलो आरामले अतीतको व्यावसायिक नेट नौकाहरुका लागि ती सजिलो लक्ष्य बनाएको छ, जसले गर्दा भविष्यको जनसंख्याको विनाश हो।
जीवन एक लाल ड्रम को लागि तट मा राम्रो तरिकाले शुरू हुन्छ जहाँ अक्टोबर देखि अक्टोबर देखि अक्टोबर सम्म आइपुग्छ। ह्याचिंग्स तुरुन्तै बढ्दै जान्छ, र माछाको लार्वल चरणहरू बाहिरी टापुहरू मार्फत नजिकैको समुद्र तट वरिपरि भेट्न सकिन्छ।
टाइडल संस्करणहरूले बढ्दो लार्वालाई टाढा टाढा मार्शक्र्रेसन र नदाइहरूमा ल्याउँछ। जीवनको पहिलो जाडोको लागि, तिनीहरू आक्रामक माछाबाट अपेक्षाकृत संरक्षित मार्शलमा रहनेछन्। निम्न वसन्त र गर्मीले तिनीहरू नदी र आवाजको निचो सम्म पुग्छ।
जीवनको यस चरणमा र अर्को तीन देखि चार वर्ष सम्म, रातो ड्रम यी अनुमानिय पानी भित्र रहनेछ, मुख्य रूपमा चिन्ता र केकडामा खाना खान्छ र परिपक्वता बढ्दै जान्छ।
यो आफ्नो जीवनमा यस अवधिमा छ कि धेरै माछा हुक र लाइनबाट पकडिएको छ।
पन्ध्र पाउन्ड भन्दा माथिको माछा माछाहरू ध्वनीहरू, कटौती र समुद्रको पानीमा डुबाउँछन्। त्यहाँ तिनीहरू वयस्क माछाको ठूलो स्कूल बनाउँछन्।
यी तथ्याङ्कहरू वर्णन गर्दछन् किनकि प्रत्येक वर्ष सबैभन्दा ठूलो रातो ड्रम सागर जाने गरिन्छ, सामान्यतया सर्फ मछुआरेद्वारा पकडिएको छ। उनीहरूले पनि व्याख्या गर्दछन् किन यति धेरै सानो माछा ज्वारल creeks र estuaries मा भेटिन्छ।
यो सबै महान जानकारी दिइयो, हामी यो वर्ष भर मा अधिक माछा पकड्न कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भनेर हेरौं।
रातो ड्रम को लागि माछा पकडने केहि केहि उत्पादक माछा पकडने को लागि विशेष रूप देखि ठूलो बडा माछा को लागि हुन सक्छ। प्रजनन चक्र पूरा भएको छ र ठूलो माछा खाना खोज्दै सर्फ रोमिङ गर्दै छन्। बेटफिशको विशाल स्कूल, मिलेट र मेनुहाडेन सहित दक्षिणतिर आइपुगेका छन् जुन आइतवारको ठमेलको मौसमबाट बच्न समुद्र तटमा।
ब्लूफिश स्कूलहरू बैटफिशको साथमा रहनेछन्, आफैलाई जोगाएर प्रत्येक मौकामा पानीले फराकिलो पार्छ। नीलोफिशमा ध्यान दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू केवल मजाक लाग्दैनन्, तिनीहरू सँगै ठूलो रातो ड्रम हुन्छन्।
यो ड्रम को लागि एक ड्रम को लागि पीछा र बेटफिश खाने को लागि, तर अपेक्षाकृत गहिरो पानी मा, ड्रम बेटफिश पकडने एक कठिन समय छ।
ड्रम मुख्य तल तल फीडरहरू छन्, तीतिर छिटो छिटो अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। तर गहिरो पानीमा बटफिश खराद गर्न सक्दछ, केहि ड्रमले गर्दा समस्या आएको छ।
कुन ठूलो ड्रमले सिकेको छ नीलीफिशको पालना र बायाँका लागि हेर्न। बैटफिशको टुक्रा ब्लूजको तेज दाँतले काटेर तल निस्कन्छ जहाँ ठूलो रातो स्वाद हुन्छ।
यो वर्ष को समय तल केहि राम्रो, ताजा, कटौती को चारा छ। समुद्र तटबाट, बेथफिश भन्दा राम्ररी कास्ट गर्नुहोस्, त्यसैले तपाईंको चारा नीलोफिश द्वारा निस्कने बिना तल पुग्न सक्छ। धीरे धीरे आफ्नो बैट को किनारा को किनारा मा स्थानांतरित गर्छन ताकि यो बैटफिश को तल तल मा छ, र काटने को इंतजार। अक्सर यस प्रकारका माछाहरूसँग हड्ताल एक खराब छ, पछि लामो, बलियो दौड।
यदि तपाईं यस विधिको साथ केहि राम्रो फ्लाउन्डर उठाउनुहुन्छ भने आश्चर्यचकित नगर्नुहोस्, किनभने तिनीहरूले नीलीफिशसँग समान सिबायोटिक सम्बन्ध विकास गरेका छन्। जेकिल टापुको किनाराको उत्तरी भागको एक हालैको भ्रमणमा, फ्लाउन्डरले नीलीफिशको अप्ठ्यारो पोषण उन्मादबाट बचाउन आफूलाई समुद्र तट देखेको देखियो! सर्फ एङ्गलरले तीव्र गतिमा चार र पाँच पाउन्ड फ्लाउन्डर उठाए जस्तै उनीहरूले सकेका थिए!
क्रिसमस र नाउहरूमा माछा माछा खान्नु भनेको ब्याकवाटरबाट ध्वनि र नजिक रहनु हो।
गत वर्षको बिरुवाले खाडी र सुक्खा पानीमा सिर्जनाकर्ताहरूबाट चाल बनाउनेछ। ओइस्टर बारहरू, कडा तल, र कहीं पनि हालको कट एक अंक वा टापुको वरिपरि हेर्नुहोस्। यो प्राकृतिक क्षेत्रहरू ड्रमको लागि मण्डलीमा छन्, र तिनीहरू सजिलै चिन्ता, साना केक्राहरू, मिड मिननोहरू, वा कृत्रिम बाटाहरूमा पकड्न सक्छन्। वर्तमान संग तलको बन्द लाइभ चिन्ता फ्लोट गर्नुहोस् र चारा बिन्दु वा कट मार्फत चल्न दिनुहोस्। सम्झनुहोस्, सानो माछालाई जारी गर्न आवश्यक छ, त्यसैले उनीहरूको हेरचाह संग संभाल।
यो सर्फ माछा पकडने विधि प्रयोग गर्न बाधा द्वीपहरु को प्रत्येक समुद्र तट को लागि देखो। रेड्स उन सबै मा हुनेछ जो बिटफिश को पार गर्न को लागि स्थानांतरित गरेको छ।
जाडो लाल ड्रम पत्ता लगाउन सजिलो सबैभन्दा कठिन समय हुन सक्छ, तर जब तपाइँ तिनीहरूलाई भेट्टाउँदा तिनीहरू पकड्न सकिन्छ। सानो बूढा माछाहरू आफ्नो पहिलो सर्दहरू क्रिसमसहरूमा बिताउन विशेष रूपमा तापमान विलुप्त हुन सक्दछन्। अचानक चिसो पक्षहरूले सानो माछा मार्न सक्छ यदि तिनीहरू चाँडै न्यानो पानीमा जान नदिन्छन्।
दिनको बीचमा माछाको लागि हेर्नुहोस्, सूर्य द्वारा उचालीरहेको पानीमा। अक्सर एक उज्यालो आवाजमा स्याहारको माछाको सम्पूर्ण विद्यालय भेट्न सकिन्छ। र हरेक माछा पकडाउन यो साँच्चिकै सम्भव छ। त्यसोभए, तपाईंको पकडको ख्याल राख्नुहोस् र एक सजिलो रिलीज अभ्यास गर्नुहोस्।
Ogeechee, Canoochee, Altamaha, र सेन्ट मरियम नदियों को कम पुग्छ सबै को रचनाहरु र फीडर creeks छ कि दिन को बीच मा माछा पकड जाएगा।
क्रीकको आवाज जुन ध्वनिमा खाली छ, र समुद्रको अग्लो ठूलो आवाजमा गहिरो पानीको कटौती ठूलो माछा समात्नेछ। गहिरो पानी काटेर लंगरमा माछाको माछा जहाँ उज्यालो पानीमा आउँछ। यो माछाले भर्खरै एक कटको बीचमा चल्छ। तिनीहरू एक कट को किनारा संग लडाई संग ले जाएँगे, अधिकतर एक फाइल लाइन मा जो कि एक सय माछा मा कुल गर्न सक्छन्।
माछा दाँया तिर निलो केलाब प्रयोग गरेर दायाँ तिर। सानो खोल व्यास संग कुनै पनि दुई इन्च भन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठूला व्यक्तिहरू खपत वा तिमाहीमा हुनुपर्छ। ल्यान्डिङ नेट ल्याउनुहोस्, किनकि यी कटाई माछाहरु पचास पाउन्ड सम्म पुग्न सक्छ!
धेरै एङ्गलरहरूले यसलाई सर्दी जाडो दिनमै बनाउँदैन, त्यसैले तपाईंसँग सम्पूर्ण आवाज पाउन सक्नुहुनेछ! सेन्ट एन्ड्रयूज, सेन्टोनियन्स, अल्टिमाहा, डोब्यय, सेपेलो, सेन्ट क्याथरीन, ओसब्व, र वासाव को सबै केहि गहिरो पानी च्यानलहरु र सर्दियों को समयमा माछा पकडने मा कटौती।
वसन्तसम्म, पानीले न्यानो लगाएको छ र खुट्टा माछाले दसौं बाह्र इन्च लम्बाइ पुग्यो। पछि सिर्जनाकर्ता र मार्शलहरूमा, यो माछा दिन दिन पछि बाहिर जाने सवारी मा पकड्न सकिन्छ। उनीहरूले गहिरो सिर्जना पानीमा लुगा घुमाउन सिकेका छन र एक उचाइ पोखरीमा झुन्ड्याउनबाट बचाउन सिकेका छन्। यो आदतले तिनीहरूलाई एकै कट वा बिन्दु पार गरेको छ, र ज्वार पछि एकैपटक चल्ने च्यानलहरूमा सार्नु पर्छ।
जब लाइट परिवर्तन हुन्छ र ऊ बढ्न थाल्दछ, ती फेरि फेरि क्यान्सरहरूमा फर्किनेछ।
रातो ड्रमका स्कूलहरू साधारणतया साइजमा विभाजित हुनेछन्। जब तपाईं सानो माछा समात्न शुरु गर्नुहुन्छ, तपाईं आश्वस्त हुन सक्नुहुनेछ कि सम्पूर्ण विद्यालय जस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू एउटै ढाँचाबाट बाहिर आए। त्यसोभए यदि तपाईं ठूलो माछा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई एक फरक क्रेकमा फरक विद्यालय खोज्न आवश्यक पर्दछ।
यो प्रयास गर्नुस्। मृत न्यून लाइटमा, एक सिर्जनाकर्ता पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाई नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ, र पानी बाहिरको वरपरको तलको ढाँचा पहिचान गर्नुहोस्। च्यानलहरूमा नोटहरू, ओइजर बारहरू र काट्नुहोस्। यदि तपाईलाई थाहा छ कि तपाईं उच्च घाँस मा आफ्नो डुङ्गा लिन को लागी बायाँ उच्च र सुत्न डर लाग्न सक्नुहुन्छ, तपाईं सफलतापूर्वक creeks नेभिगेट गर्न र माछा खोज्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले यस विधिको साथ पत्ता लगाउने सिर्जना "जीवित" हुन आवश्यक छ। त्यो हो, यो बेटफिश र अन्य गतिविधि को संकेत देखाउन आवश्यक छ। यी संकेतहरू एक निश्चित शर्त हो कि जूनियर रातो ड्रम त्यो विशेष क्रेकमा सार्नेछ।
क्रीक माछा माछा बोमसहरु संग शुद्ध मिड फ्लैट्स मा समाप्त हुन्छ र यसमा शेलफिश या बेटफिश को कुनै संकेत छैन, किनकी ड्रम बस वहाँ नहीं हुनेछ। ओइस्टर बारहरू र कडा खोल बोतलको लागि हेर्नुहोस्।
सानो फीडर कर्सिको ठूलो क्षेत्रहरूमा खाली ठाउँहरू माछा गर्नुहोस्। एक ठूलो क्रीक को टाउको मा सुरू गर्नुहोस्, र लडाई को रूप मा, यस संग ले जाएँ, बाटो मा प्रत्येक फीडर creek माछा पकडने।
यस अवस्थामा, एक चौथाई उउन्स जेग टाउको प्रयोग गर्नुहोस् एक पूंछ पकाएको लाइभ चिन्ता वा एक होंठ झुकाएको मिच मिनेटमा। फीडर क्रिकेस्टमा कास्ट गर्नुहोस्, र जगेको तल निस्कने ज्वरो प्रवाह संग काम गर्नुहोस्। एक कहिलेकाहीँ फ्लाउन्डरले यो तरिकामा विविधता र उत्कृष्ट तालिका टेप गरिदिन्छ।
सेन्ट मरियम, Altamaha, र Savannah नदी बेसिन को पानी को कोशिश करो गहिरो रचनाहरु को खोज को लागि। स्थानीय चारा पसलहरूमा सोध्न डराउनु नपर्ने जो कम लाइटमा क्रेगहरू नेभिगेबल छन्।
ठूलो लाल ड्रम अझै गहिरो कटुवा समुद्रमा छ, प्रजननका लागी उत्थानको किनारामा तयार पारियो। उही सर्दीमा तल माछा माछाको प्रविधिहरूले मौसम युद्ध सम्म काम गर्नेछन्। त्यस समयमा, माछाले अपतटीय प्रजननलाई सुरू गर्न सुरु गर्नेछ।
रातो ड्रमको लागि Summertime माछा माछाको बिटफिश पछ्याइएको छ। बस स्कटआउट विद्यालयको रूपमा र बिटफिशको ज्वारको साथमा पछ्याउनुहोस्, त्यसैले रातो ड्रम गर्नुहोस्। तपाईं गर्मीमा 27 महिना भन्दा धेरै माछाहरू अपरिहार्यमा माछा पकड्न सक्नुहुन्न, किनभने तिनीहरूका माछाहरू स्थिति प्रजनन गर्न परिपक्व छन् र उनीहरूका जैविक कर्तव्यहरू अपमानजनक हुनेछन्।
माछा पन्ड्र पाउन्ड सम्म ध्वनि र रचनाहरूमा पकड गर्न सकिन्छ जुन चरामा राखिन्छ।
तिनीहरू लुक्ने संग चल्नेछ र बाहिर जाने ज्वारमा समात्न सकिन्छ।
उही तिमाही उउन्स जेग टाउकोहरू चिन्ता वा चिसो मिनीहरूसँग प्रयोग गर्नुहोस्, फेडर क्रिकेक्सहरूमा कास्ट गर्दै। गहिरो च्यानल माछा अझै पनि ध्वनी मा तल माछा माछा पकड्न सकिन्छ, तर धेरै माछाहरू खाना र पेन्डिङहरूमा पालना गर्छन्।
एक फ्लोट अन्तर्गत प्रत्यक्ष चिन्ता राम्रोसँग काम गर्नेछ जहाँ तपाईं एक कलकत्तामा गहिरो बाहिरिन्छ। ढोकाले ढोका घुमाईरहँदा, तिनीहरू गहिरो पानीमा बस्छन् किनकी त्यो ज्वरो प्रवाहको अधिकांश हुन्छ। चिन्ता फ्लोट अन्तर्गत तलबाट टाढा राख्नुहोस्, र यसलाई ज्वारको साथ बहाउनुहोस्। यो विधिको साथ प्रयोग गर्दा ड्रम संग मिश्रित केही सीटआउट को अपेक्षा गर्नुहोस्।
कृत्रिम lures को लागि, लिग टाउको मा तैरने वाला पूंछ ग्रब को कोशिश करो। गुलाबी र रातो सबै भन्दा राम्रा रंग हुन्, चिन्ताको अनुकरण। उज्यालो पानीमा, रातो ड्रम कहिलेकाँही डल्टन स्पेशल जस्तै माथिल्लो पानीको प्लगमा हिंड्छ। स्ट्रीमर यी सर्तहरूमा उडानमा ड्रम लिनको लागि टिकट हो।
बस सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं उडान को स्वाभाविक रूप देखि ज्वरो वर्तमान संग चलने को लागि पर्याप्त तेजी देखि पट्टी राख्नुहोस।
बस कुनै पनि क्रीक को बारे मा सेन्ट मैरी देखि सावनाह सम्म कुनै मार्श क्षेत्र मा जा रहेको छ माछा पकडने को क्षमता छ। कुञ्जीले चरा लगाउने ज्वरो प्रवाह फेला पारेको छ। माछा ठीक पछाडी र चारा भित्र हुनेछ।
ग्रीष्म सामान्यतया समय हो जुन हामीले वर्षको कुनैपनि समयमा भन्दा धेरै बर्षको अनुभव गर्दछौं। Creeks of headwaters मा सानो माछाले अत्यधिक ललापन परिवर्तनहरू लाई कमजोर छन्, र वर्षाबाट भारी तातो पानीको बहाव जनसंख्यालाई चोट पुर्याउन सक्छ।
रातो ड्रम साँच्चै वर्षको कुनै पनि पटक पकड्न सकिन्छ। तिनीहरू पकडने अपेक्षाकृत सजिलो छन्, र हामीसँग धेरै वर्षको लागि धेरै कोण्ट्राहरू छन्। यदि हामी भविष्यका साताका लागि रातो ड्रमको पुन: भण्डारण स्टक जारी राख्नुपर्छ भने, हामीले जर्जिया डीएनआर तटीय संसाधन प्रभागमा संरक्षण प्रयासमा सख्त ध्यान दिनुपर्छ। तथ्य यो छ कि यी माछाहरु लाई परिपक्वता प्रजनन सम्म पुगन सम्म पुगन सम्म पांच वर्ष सम्म को मतलब हामी हामिलाई सुनिश्चित गर्न को लागी केहि सानो माछाहरु को बहुमत को बहाने को पानी मा फिर्ता गर्न को लागि सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
डीएनआर तटीय संसाधन प्रभागको साथ इन्शोर फिनफिश रिसर्चको प्रभारी जीवविज्ञान विशेषज्ञ जॉन पफर्ड अनुसार, गत दुई वर्षमा जर्जियाली जलविद्युत ड्रममा मनोरञ्जन एङ्गलरले खेतमा दुई लाख रेड ड्रम लगाएको छ। ठूलो रातो ड्रमको हालको नमूनाहरू किशोर माछाको कम संख्या प्रतिबिम्बित गर्दछ जसले प्रजनन आकारमा पुग्छ। अधिकांश वयस्कों नमूना बारह र बीस वर्ष को बीच मा थियो। वास्तवमा, आदर्श नमूनाले धेरै माछाहरू चार देखि बाह्र वर्षको उमेरको कोष्ठमा देखाउँदछ।
यस निचो कोष्ठमा माछाको कमीले यसको अर्थ सम्भव छ कि हामी धेरै माछा काट्न सक्नेछौं भन्दा अघि सम्भावित प्रजनन पुग्ने।
त्यसोभए यो हाम्रो छ। जब हामीसँग ठूलो लाल ड्रम मछुआरा छ र हामी बीसौं इन्च भन्दा लामो ब्रेडर माछाको फसललाई निषेधित गर्दछौं, हामी बिस्तारै सानो माछा सँगसँगै सावधान रहनुपर्छ। आफ्नो पाँच माछा सीमा लिनुहोस्, र कोच र रिलीज स्रोतको आनन्द लिनुहोस्। तर तिनीहरूलाई छोडिदिनु सानो माछालाई सावधानीपूर्वक सावधानीपूर्वक सुनिश्चित गर्नुहोस्। र यदि यो टेबल किराया हो भने पछि तपाईं पछि केही सीटआउट र फ्लाउन्डर जो सधैं तिनीहरूसँग मिश्रित हुन्छन् जब लाल ड्रम मा कब्जा र रिहाउने अभ्यास विचार गर्नुहोस्। यसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि संसाधन सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।
Grouper को लागि पकडने र मत्स्य पालन गर्न विभिन्न तरिका
उत्तम साल्ट्रीटर ट्रोलिङ मोटर्स
हलिबटको लागि बounce ब्यान्डिङ
शोर मत्स्य पालन Kona कोस्ट
कसरी एक चार्टर बोट कप्तान बनें
रेफफिश पत्ता लगाउने
कालो कोड मत्स्य पालन युक्तिहरू
क्यालिफोर्निया Corbina को लागि सर्फ मत्स्य पालन
Flounder Cleaning Instructions - कसरी फ्लाउन्ड सफा गर्ने
शुरुवातका लागि साल्ट वाटर फिशिंग युक्तिहरू
पार्गो: ब्याच बाजाको ब्रिट स्नैपपर
Pollen को बारे मा 10 तथ्य
T5 कर स्लिप्स
7 तपाईं विचार गर्न आवश्यक अद्भुत र सस्ता बोर्डिङ स्कूलहरू
फ्रांसीसी क्रांति, यसको परिणाम र विरासत
विशाल घाँसदार रोम्स नयाँ अर्लिन्स बाढी?
शीर्ष टेनेसी कलेज
एल्म्स कलेज प्रवेश
फ्रैंक लयड राइट इन्टर - वास्तुकला भित्र हेर्नुहोस्
इम्बोल्क को देवताओं
फ्रान्सेन्सी सिक्दै: जहाँ सुरु हुन्छ
50 महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू तपाईंले शिक्षकहरूको बारेमा थाह पाउनुपर्छ
सबैभन्दा पवित्र रानी को रानी को प्रार्थना
बेस्ट र बेस्ट ब्रूस विलिस चलचित्रहरू
2016 ओलम्पिक गोल्फ टूर्नामेंट ढाँचा र फील्ड के हो?
स्टेनिन स्कोर उदाहरण
स्पेस सूटको इभोल्युसन
नेभिल्स को सेन्ट गेर्ट्रूड को थिए (बिल्लियों को संरक्षक संत)?
गोल्फ शफ्टहरूको 'स्किइङ' के हो र तपाईंलाई हेरचाह चाहिन्छ?
कसरी पूल पङ्क्तिहरू रैकलाई ठीक तरिकाले, एक च्याम्पियन जस्तै
"टफल्स" मा सुत्न गस्पसेल द्वारा एक मृतक किसान को कहानी
रसायन विज्ञान को5शाखाहरु के हो?
एसएटी परीक्षण कस्तो छ?
अफ्रिका-अमेरिकन लोक संगीतको इतिहास
पुरातन मिस्रहरूले मिश्रलाई किन बोलाइन्?